March 2018 - Page4of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးငယ်များနှင့် ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ( အပိုင်း ၁ – မွေးကင်းစမှ ခြောက်လအထိ) ကလေးငယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုဟုဆိုလိုက်လျှင် လူအများက ကလေးငယ်၏ကိုယ်အလေးချိန် မည်မျှပိုလာသည်၊ အရပ်မည်မျှရှည်လာသည်ကိုသာ တွေးမိကြပေမည်။ ထိုသည်မှာကြီးထွားမှုဖြစ်သည်။ ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မတူညီ ဟူသည့်အချက်ကို သိရှိထားသင့်ပေသည်။ ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု…
ညှပ်ဆွဲ လေစုပ်ကလေးမွေးတယ်ဆိုတာ မိခင်တစ်ယောက် ကလေးမွေးဖွားရာမှာ ယျေဘူယျအားဖြင့် ခွဲစိတ်မွေးတာ၊ ရိုးရိုးမွေးတာနဲ့ ပစ္စည်းအကူအညီနဲ့မွေးတာဆိုပြီး သုံးမျိူးရှိပါတယ်… ပစ္စည်းအကူအညီယူပြီး မွေးတယ်ဆိုတာ မွေးလမ်းကြောင်းကနေပဲ ညှပ်ဆွဲတာ ဒါမှမဟုတ် လေစုပ်တာနဲ့ ကူညီမွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်… အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်… ဒီလို ပစ္စည်းအကူအညီနဲ့မွေးတာဟာ မွေးဖွားမှူတွေရဲ့ သုံးရာခိုင်နှူန်းလောက်ရှိတယ် ဆိုပါတယ်……
မေ့မရတဲ့နွေအိပ်မက်ဆိုး ဦးပြုံးချိုဆိုတာ အသက် ၄၀အရွယ်၊ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်။ တစ်ရွာလုံးမသိသူမရှိ။ ရပ်ရေးရွာရေးဆို သူပါမှ။ ပွဲလမ်းသဘင်ဆိုလည်း သူပါမှ စည်ကားတာ။ အဲသူက ပိုက်ဆံရှိလွန်းလို့တော့မဟုတ်။ လယ်လုပ်ကောက်စိုက်လုပ်တဲ့လူပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ကူညီခြင်တဲ့စိတ်ကြောင့်တစ်ရွာလုံးကခင်ကြတာ။ ဒီလို ကျန်းကျန်းမာမာပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူက ရုတ်တရက် ဆုံးသတဲ့။ တစ်ရွာလုံးမယုံနိုင်။ ဖြစ်ပုံကလည်း အဆန်း။…
သင့်ကလေး ကျောင်းမှာ အနိုင်ကျင့်ခံနေရပြီလား ကလေးငယ်ဘဝဆိုတာ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ သောကအကင်းဆုံးအချိန်တွေလို့ပြောကြပါတယ်။ အပူအပင်ကင်းတဲ့ကလေးဘဝလို့ တင်စားပြီးခေါ်ကြသလိုပါပဲ။ လူအများစုဟာ ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ကလေးဘဝမှာရရှိကြပါတယ်။ ငယ်ဘဝမှာ ကျောင်းနေပျော်၍ စာတော်သော ကလေးငယ်များဖြစ်ဖို့အတွက် မိဘ၊ ဆရာတို့အပြင် ကလေးငယ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှ ပံ့ပိုးမှုကိုလဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကျောင်းမှာပျော်ရွှင်နေရမယ့်ကလေးငယ်တွေဟာ…
Disadvantages Of Early School Start Time
ကျောင်းတော်ကြီးကိုစောစောပို့ကြတော့မှာလား ယနေ့ခေတ်ပြည်သူတွေဟာ မျက်မှောက်ကာလမှာ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာတာနဲ့အတူ ပညာရေးကိုပိုပြီးဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သားသမီးများကို ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ စောနိုင်သမျှစောစော သူများကကြောမသွားရလေအောင် အသက်မပြည့်ခင်မှာပဲ ကျောင်းအပ်ကြတဲ့အလေ့အထရှိကြပါတယ်။ ဒီလို ကျောင်းစောစောအပ်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ ပညာရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအခြေအနေဟာ တကယ်တိုးတက်မှုရှိလာပါရဲ့လား…။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့…
လိင်အဂါၤ ရေယုန်ရောဂါ လိင်အဂါၤ ရေယုန်ရာဂါဆိုတာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး…. လူတော်တော်များများမှာ ရောဂါလက္ခဏာ မပြပေမယ့် သူ့ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ကို ကူးစက်နိုင်တာမျိူးပါ…. ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ HSV 1 နဲ့ HSV2လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှစ်မျိူးကြောင့်…
ခြစ်ရင်ကောင်းမလား မခြစ်တာကောင်းမလား (သို့မဟုတ်) ခြစ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ သွားကျောက်တွေပါးစပ်ထဲမှာရှိတာက ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်တယ်ဆိုတာ ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လူနာတွေဘက်က မေးစရာတွေပေါ်လာတယ် ပါးစပ်ထဲက ကျောက်ကို ဘယ်အချိန်မှာခြစ်ရမလဲ?? ခြစ်ရင်ရော သွားကို မစားသွားဘူးလား?? နာမှာလားး ?? ခြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဘာဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ?? စသဖြင့် မေးခွန်းများစွာ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိနေမှာပါ…
လူကြီးဆော့တဲ့ အရုပ်တွေ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်တော်အရင်ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြပြီးသွားတဲ့အတွက် ဒီတစ်ခါ အာသာဖြေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာလေးတွေ (sex toys) အကြောင်းတင်ပြချင်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး အတော်များများနဲ့ အနည်းငယ်ဝေးကွာနေသေးတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စိတ်နှိုးဆွကိရိယာတွေ(sex toys) ဒီပစ္စည်းလေးတွေဟာ လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့နဲ့ အာသာဖြေဖို့ထုတ်ထားတဲ့ကိရိယာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Sex toysလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မျက်စိထဲမှာ…
အာသာပြေပျော့ စိတ်ဖြေလျော့ကြတဲ့အခါ လူငယ်လူရွယ်ရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အားလုံးနီးပါးသော ယောကျ်ားလေးများနဲ့ မိန်းကလေးအချို့ဟာ မိမိဘာသာလိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ခြင်း (masturbation) ကိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မိမိဘာသာမဟုတ်ဘဲ မိမိလက်တွဲဖော်နဲ့အတူ လိင်အင်္ဂါချင်း မထိစပ်ဘဲ လက် သို့မဟုတ် ကိရိယာလေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန်စိတ်ဖြေတာကိုလည်း masturbation လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ယောကျ်ားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် လိင်စိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။…